BitFinex Tokens စျေး - အွန်လိုင်း BFX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitFinex Tokens (BFX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitFinex Tokens (BFX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitFinex Tokens ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $334 485.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitFinex Tokens တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitFinex Tokens များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitFinex TokensBFX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1BitFinex TokensBFX သို့ ယူရိုEUR€0.844BitFinex TokensBFX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.764BitFinex TokensBFX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.909BitFinex TokensBFX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr8.89BitFinex TokensBFX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.6.29BitFinex TokensBFX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč22.02BitFinex TokensBFX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł3.71BitFinex TokensBFX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.33BitFinex TokensBFX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.39BitFinex TokensBFX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$21.99BitFinex TokensBFX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$7.75BitFinex TokensBFX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$5.42BitFinex TokensBFX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹74.85BitFinex TokensBFX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.168.84BitFinex TokensBFX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.37BitFinex TokensBFX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.53BitFinex TokensBFX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿31.12BitFinex TokensBFX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥6.95BitFinex TokensBFX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥106.59BitFinex TokensBFX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1187.04BitFinex TokensBFX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦386.23BitFinex TokensBFX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽72.84BitFinex TokensBFX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴27.34
BitFinex TokensBFX သို့ BitcoinBTC0.00009 BitFinex TokensBFX သို့ EthereumETH0.00261 BitFinex TokensBFX သို့ LitecoinLTC0.0184 BitFinex TokensBFX သို့ DigitalCashDASH0.011 BitFinex TokensBFX သို့ MoneroXMR0.0112 BitFinex TokensBFX သို့ NxtNXT78.01 BitFinex TokensBFX သို့ Ethereum ClassicETC0.147 BitFinex TokensBFX သို့ DogecoinDOGE288.62 BitFinex TokensBFX သို့ ZCashZEC0.0121 BitFinex TokensBFX သို့ BitsharesBTS30.81 BitFinex TokensBFX သို့ DigiByteDGB32 BitFinex TokensBFX သို့ RippleXRP3.55 BitFinex TokensBFX သို့ BitcoinDarkBTCD0.0345 BitFinex TokensBFX သို့ PeerCoinPPC3.32 BitFinex TokensBFX သို့ CraigsCoinCRAIG455.71 BitFinex TokensBFX သို့ BitstakeXBS42.65 BitFinex TokensBFX သို့ PayCoinXPY17.46 BitFinex TokensBFX သို့ ProsperCoinPRC125.49 BitFinex TokensBFX သို့ YbCoinYBC0.000538 BitFinex TokensBFX သို့ DarkKushDANK320.97 BitFinex TokensBFX သို့ GiveCoinGIVE2166.24 BitFinex TokensBFX သို့ KoboCoinKOBO227.86 BitFinex TokensBFX သို့ DarkTokenDT0.921 BitFinex TokensBFX သို့ CETUS CoinCETI2888.73
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 08:10:02 +0000.